Raharaha 7 Febroary – Ravalomanana Marc : Nohamafisin’ny Fitsarana ny fampiharana didim-pitsarana -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha 7 Febroary – Ravalomanana Marc : Nohamafisin’ny Fitsarana ny fampiharana didim-pitsarana
Tapi-dalan-kaleha. Izay no manjo ny Filoha teo aloha sady filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (Tim), Marc Ravalomanana, sy ireo voapanga rehetra niraka taminy tamin’ireny “Raharaha 7 febroary 2009” ireny.
Raha niakatra Fitsarana, ny 11 desambra teo, mantsy iny raharaha iny, izay ny fikamban’ireo niharam-boina tamin’ny 2009 teny Ambohitsirohitra na ny AV7 no nitory azy ireo, nanambara ny mpitsara tamin’izany fa mivoaka ny 28 desambra ny didi-pitsarana.
Araka izany indrindra, nivoaka omaly tokoa ny didi-pitsarana mahakasika ny fitorian’ny AV7 an’Ingahy Marc Ravalomanana miaraka amin’ireo olona 19 voasaringotra tamin’iny “Raharaha 7 febroary” iny. Noho izany, nolavin’ny Fitsarana avy hatrany aloha, ny fanoherana ny “saisi-arrêt” nataon’izy ireo sy ny mpisolovava miaro azy ireo. Izany hoe, nanao fanoherana mahakasika ny fanakantonan’ny Fitsarana ny “compte” misy ny petra-bolan’izy ireo any amin’ny banky izy ireo. Nolavin’ny Fitsarana avy hatrany anefa io fanoherana nataon’izy ireo io.
Noho izay indrindra, tsy maintsy tanterahina ny didi-pitsarana izay nivoaka mahakasika ny “saisi-arrêt” momba ireo “compte” misy ny petra-bolan’ireo voasaringotra rehetra tamin’iny “Raharaha 7 febroary” iny ka anisan’izany ny an-dRavalomanana sy Ralitera ary ny kaomisera Rakotovao, sns.
Ankoatra izay, tsy maintsy mandoa ilay onitra na lamandy izay notakian’ny AV7 mitentina 600 tapitrisa Ar ihany koa izy ireo. Noho izany indrindra, mihatra avy hatrany ny fanatanterahana ilay didy raha toa ka tsy manao fampankarana izy ireo. Ary raha toa ka tsy ahitana na tsy manana petra-bola ao amin’ilay “compte” any amin’ny banky handoavana io lamandy mitentina 600 tapitrisa Ar takian’ny AV7 io ihany koa izy ireo, miditra na miroso amina drafitra hafa indray ny Fitasarana, amin’ny alalan’ny fitanana ny fananan’izy ireo, toy ny trano, tany, fiara, sns.
Araka izany, tsy afaka mitsoaka ary tsy afaka manipy ny raharaha eny amin’ny Filan-kevitry ny Fampihavanana Malagasy (CFM) araka ny filazan’izy ireo teo aloha teo izy ireo. Andrasana ny mety ho tohin’ny raharaha amin’ny fandoavana io lamandy io sy ny fanatanterahana ny didy.
Loza mahatsiravina indray no niseho tao amin’ny fokontany Ambodiaramy, kaominina ambanivohitr’Ambinanitelo, Distrikan’i Maroantsetra ny zoma hariva lasa teo. Olona miisa valo no indray namoy ny ainy vokatry ny fihotsahan’ny rano vato tany an-toerana tamin’io fotoana ...Tohiny